WordPress: Etu esi eme vidiyo Facebox Popup | Martech Zone
Vimeo na vidiyo Youtube na-enye vidiyo vidiyo dị elu nke nwere ike weghara ezigbo ụlọ na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ. Otu ụzọ kachasị mma maka nke a bụ iji usoro a kpọrọ Facebox. Igbe ihu bụ ụzọ dị mma iji gosipụta windo n'ime ibe gị na-enweghị windo popup dị iche.
Datalọ Ọrụ Data Ndụ nwere vidio nke Ọzọ Cool Design mepụtara nke ha chọrọ igosi na ibe ha - na-enweghị imegharị ma ọ bụ chegharịa isiokwu ahụ. Yabụ - anyị mere obere onyonyo mara mma nke nwere nnukwu igodo egwuregwu na ya, wee tinye koodu na -emepụta windo mara mma iji gosi vidiyo ahụ n'ime.
Ntinye ihe di mfe site na iji WordPress Facebox Gallery ngwa mgbakwunye si Emere ya. M kere ihe ihu mpụga (video.html) na mgbọrọgwụ nke saịtị ahụ nwere vidiyo (ya na autoplay = 1 nke mere na ọ na-akpaghị aka mgbe ọ ga-emepe), wee tinye wijetị ederede na snippet dị mkpa.
The rel = ihu igbe Nhazi bụ ihe na-ebute koodu ozugbo pịa ya. Ọ Pop elu video facebox na-amalite na-egwu ozugbo. Ọ bụ ntinye dị mfe na azịza dị mfe maka itinye vidiyo ma ọ bụ karịa n’ime ibe. Anyị ga-eji usoro a na saịtị ọzọ n'oge na-adịghị anya!
MARA: Ọ dị mkpa ijide ọnụ ọgụgụ nke nlele na vidiyo dị n'ime nke onye ahịa nchịkọta (Nchịkọta Google), yabụ anyị tinyekwara ihe omume onclick na mkpado arịlịka. Ugbu a, mgbe ndị mmadụ pịa vidiyo ahụ, anyị na-enweta ihu igwe 'mebere'. M tinye koodu dị n'elu.
Dave Bergschneider kwuru
Jul 12, 2010 na 11:36 PM
Daalụ maka ịdepụta nkuzi. Echere na ọ ga-ekpochapụ ụfọdụ ihe maka itinye ọdịnaya dị na inline na mmapụta ihu igbe. 🙂
You na-aghọta na ntụgharị n'elu emechi windo ahụ, vidiyo ahụ ga-anọgide na-egwu n'azụ? (gbaba n'ime nsogbu ahụ n'onwe m ma ana m achọ ịchọta mmezi!)